Miranda Kerr: "Mahery sy sarotra amin'ny raharahambarotra aho, ary ao an-trano ny vehivavy be fitiavana sy be fitiavana!"
Miranda Kerr nanalavitra ny fiainam-bahoaka, modely, tsy nanatrika fivoriam-pianakaviana, nametraka ny fianakaviany, ny fifandraisany tamin'ny vadiny ary ny fivoaran'ny raharaham-barotra nataony. Maro no manandrana sy manontany tena raha azo atao ny mampifandray ny fianakaviana sy ny orinasa, saingy araka ny modely, dia azo atao ny zavatra rehetra ary ohatra tena tsara izany!
Miranda Kerr miaraka amin'i Evan Spiegel vadiny
Amin'izao fotoana izao i Miranda dia mifantoka amin'ny fianarana sy ny fampivoarana ny marika manokana, ity dia tohanan'ny Evan Spiegel vadiny, manome toro-hevitra sarobidy ary mitarika amin'ny lalana vaovao ho azy. Kerr naneho hevitra momba ny fifaneraserana sy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanao gazety ao amin'ny People:
"Evan no fitaomam-panahiko ary ny fanohanana tsara indrindra. Nampahafantariny ahy fa tokony hampifantoka ny angovoo sy ny herinao eo amin'ny orinasa ianao, aza matahotra ny haka risika amin'ny zavatra inoanao! Amin'ny tranga iray hafa, dia voavotra isika miasa amin'ny androm-piainantsika amin'ny orinasa hafa. Niasa nandritra ny fotoana ela aho ho modely, nomeko 20 taona, ary fotoana tena tsara izany, tsy hanaiky ve ianao? Taorian'ny fanambadiana sy ny fahaterahan'ny zaza, dia nanova ny laharam-pahamehana aho ary manaiky ny hitifitra raha tsy amin'ny toe-javatra mampiavaka ny tetikasa. Amin'ny toerana voalohany, ny fianakaviana sy ny zavatra ilainy! "
Miranda mahomby ny asa sy ny fianakaviana
Nizara sekretera iray fianakaviana i Kerr, manohana ny tokantrano fianakaviany:
"Mahery sy sarotra amin'ny raharahambarotra aho, ary ao an-trano dia vady feno fitiavana sy be fitiavana foana aho! Ny renibeko dia nilaza tamiko foana sy ny reniko fa ny lehilahy iray dia tokony ho faly sy ho reraka. Indrindra indrindra, izy io dia mahakasika ny endriny, aorian'ireo ankafizantsika rehetra toy ny maso! Noho izany, ho an'ny sakafo hariva, dia mitazona am-panafihana foana aho, ary eo amin'ny latabatra miaraka amin'ny sakafo hariva dia misy labozia mazava tsara. Ao an-trano, manome an'i Evan fahafahana aho hahatsapa ho toy ny lehilahy sy ny lohan'ny fianakaviana! "
Araka ny voalazan'i Miranda, any am-piasana dia tsy mamela ny tenany ho malemy izy:
"Fahavitrihana tsy azo ialana ny fahalemena amin'izao androntsika izao. Nivoaka tao an-trano aho, nitodika tany amin'ny olona feno hatsaram-panahy sy fanentanana, afaka mandray fanapahan-kevitra sy mamoaka ekipa! "
Miranda Kerr niresaka momba ny fihetseham-po nandritra ny fitondrana vohoka, ny fahasambaran'ny fianakaviana ary ny toetran'ny vadiny
Lasa ray aman-dreny i Miranda Kerr sy Evan Spiegel
Sarin'ny andro: Miranda Kerr bevohoka be
Mariho fa i Miranda Kerr mandanjalanja lalandava eo amin'ny fisaintsainany mikasika ny fianakaviana sy ny asa, mazava tsara ny andraikitry ny vady, reny sy vehivavy, afaka mamadika izao tontolo izao, mba hahatratrarana ny tanjony! Tamin'ny 2013, nizara ny heviny momba ny andraikitry ny vehivavy ao amin'ny fianakaviana izy:
"Am-piasana aho, manapaka foana, mandray fanapahan-kevitra, mandamina, miady hevitra momba ny fahaiza-manaon'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa iray manokana, saingy ao an-trano aho te-hiala sasatra sy ho malemy!"
Miranda Kerr sy Evan Spiegel
Cheryl Cole sy Liam Payne dia nandà tsaho momba ny fisarahana ny famotsorana ny jiro
Star "Card House", Robin Wright, dia nantsoina hiaraka tamin'i Kevin Spacey, mpiara-miasa aminy
Brooklyn Beckham sy Chloe Moretz dia nanohy ny fombany
Nicolas Cage nisaraka tamin'i Alice Kim
Stylinga Brooklyn Beckham no "nanandrana" ny zavatra avy amin'ny fanangonana ny rainy malaza
Irina Sheik sy Cristiano Ronaldo
Ny fividianana ny Monastery Katy Perry tany Los Angeles dia nivadika ho loza mahatsiravina
Armbant ary perla amin'ny rojo
Kianjam-pejy avy amin'ny taratasy amin'ny tananao manokana
Fanadiovana ny tsinontsinona amin'ny fanafodin'ny volokano
Kitapo amidy ho an'ny radiators
Mitondrà apples ho an'ny zazakely
Ahoana ny fametrahana ny ranom-borona?
Famantarana ny Trinite
Mozika ho an'ny fampiofanana
Ny sakafo Diukan - fanoherana
Amin'ny inona no manao akanjo mavomavo?
Inona no nofinofin'ny voaly?
Endometriozy ny ovy